TAV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတွက်အထူးလျှော့စျေး | RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာအထွေထွေဓာတ်ဆီ Ofisi ဘူတာထဲမှာ TAV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အထူးရောင်းကောင်းသည်များ
10 / 05 / 2019 အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ
ဓာတ်ဆီ Ofisi နှစ်ခုyaptı.tavပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် TAV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများတူရကီရဲ့ဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးလောင်စာဓာတ်ဆီ Ofisi ဘူတာအပေါ်တစ်ဦးလျှော့စျေးလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
ဓာတ်ဆီ Ofisi, တူရကီရဲ့ဦးဆောင်ဓာတ်သတ္တုအဆီများနှင့်ရေနံနှင့်ဓာတုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်, အရေးကြီးသောအမှတ်တံဆိပ်နဲ့သူ့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်အတူစားသုံးသူများကိုကြောင့်အားသာချက်များကိုပူဇော်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ ဓာတ်ဆီ Ofisi, နောက်ဆုံးတော့ TAV စစ်ဆင်ရေးန်ဆောင်မှုများ, Inc (TAV) နဲ့အဓိကသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဓာတ်ဆီ Ofisi အပေါငျးတို့သ TAV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကဒ်နှင့်အတူ ပူးပေါင်း. ကွင်းဆက်နှင့်အတူတူရကီရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးဘူတာရုံလောင်စာရေနံနှင့်အတူတက်ကြွစွာအသုံးပြုမှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်လျှော့န်ဆောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဓာတ်ဆီ Ofisi, ချက်ချင်းလျှော့စျေး (Classic, Plus အားနှင့် Edition ကို) နဲ့အားလုံး TAV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကဒ်သူတို့ရဲ့ပိုင်ရှင်တွေကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်။
ယင်းကဆိုသည်လျှော့စျေး၏အကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်လုံလောက်သောသော TAV နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကဒ်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပိုင်။ အဆိုပါလျှော့စျေးဟာစုပ်စက်စျေးနှုန်းထဲကလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
အခြေခံအဆောက်အအုံ, အနာဂတ်၌ထိုကဲ့သို့သောဝေးဓာတ်ဆီ Ofisi အဖြစ်အရေးအပါဆုံးတန်ဖိုးများကိုစားသုံးသူများ၏မျက်နှာများပေါ်တွင်ပြုံးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်တူရကီရဲ့တဦးတည်းအတွေ့အကြုံနှင့်ခိုင်ခံ့သောအနေအထား operating နှစ်ပေါင်းများစွာဒေသအတွက်လိုအပ်ချက်နှစ်ဦးစလုံး။
နယူးအဆင့်အတွက် TAV Tbilisi လေဆိပ်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
ဘာတွေဖြစ်ပျက်ခဲ့လေဆိပ်, အလုပျသမားမြား၏အဆုံး '' သို့ပြောင်းရွှေ့? TAV နှင့်မျှော်မှန်းသည့် iGain ဖျေါပွခကျြ
TAV လေဆိပ်, ပထမတစ်ဝက်တစ်နှစ်တာ Net ကအမြတ်အတွက် 61,3 သန်းယူရို
တာဂျစ်ကစ္စတန်၊ အီရန်၊ အာဖဂန်နစ်စတန်နှင့်တာဂျစ်ကစ္စတန်အကြားရထားလမ်း၊ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊
လမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး575 ဆီတန်ချိန်သန်းကျွန်တော်တို့ဟာလောင်တစ်နှစ်
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအီတလီနိုင်ငံအတွက် TAV စီမံကိနျးအတှကျပြုမူသူအကြမ်းဖက်သမားအပြစ်တင်
TAV3။ လေဆိပ် doping
ပြင်သစ် Akfen TAV ၏ Xnumx'lik ရာခိုင်နှုန်းကိုရှယ်ယာAéroportsက de ပဲရစ်ကျော်လှည့်
TAV Tepe Akfen ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆောက်လုပ်ရေးနှင့်စစ်ဆင်ရေး Inc က
ပါကစ္စတန်အတွက်ကားလမ်းနှင့်လေဆိပ်မှ Aspire STFA နှင့်အတူ TAV,
ဓာတ်ဆီ Ofisi စခန်းများ
TAV Passp ဖြစ်ပါသည်
ဝန်ကြီး Turhan: `ဟာပြိုကွဲလမ်းကွန်ယက် 26 642 တထောင်ကီလိုမီတာUlaştırdık`
Eskisehir အမည်တစ်လမ်းရထားမှတ်တိုင်ပို Changed